Ɔmanpanyin De Bonomantan Mu Aprɔbɔ No Aba Awieɛ - HOT STORIES GHANA
Ɔmanpanyin De Bonomantan Mu Aprɔbɔ No Aba Awieɛ
Nnaanu a atwam kɔ yi, Ɛbɔ bosome da ɛtɔso du ne du-baako soɔ yi, Revolution Broadcast de ato y’atiefoɔ ne y’akenkanfoɔ anim afa aprɔbɔ a Ghana Manpanyin Nana Addo ne ne dɔm de bɛpuee wɔ Bonomantan yi mu.
Kontronfi se: mesuman ne mani, ne saa ho nti, Ɔmanpanyin no ankasa tiatiaa ne kyawkyaw mu ne n’apamfoɔ bepuee Bonoman yi mu de wɔn ani korotwirawisi bɛhwɛɛ nwuma ahodoɔ a n’asoɛfoɔ a wɔwɔ Mantan no mu sii n’anan mu yɔɔeɛ wɔ ha no.
Sɛbe oo, Gokafoɔ se: ɔtorofoɔ na ɔse: medanseni wɔ aburokyire, enti sɛ Ɔmanpanyin asiananmfoɔ a wɔwɔ Bonomantan no mu se w’ayɔ sɛɛ ne sɛɛ a ɔde hyɛɛ wɔn nsa no deɛ a, ɛnneɛ na ɔntesɛ Ɔhene Kɔsankɔbi, enti ɔremfa no atesɛmkwa, renntena N’abankɛseɛ mu wɔ Nkran punpuni mantan no mu, ɛmma obi mmfa nsia mmɛdane no nkron, a ɔmmfa nani mmɛhwɛ.
Ansana wɔn rebɛba no, Ɔmanpanyin Nana Addo, ne n’amanyɔkuo Ɔsono Kokookuroko NPP dii kan kakyerɛɛ Ghanafoɔ sɛ ɔmo de mpuntudwuma aha-nwɔte ne akyire na aba Bonomantan no mu, a ɛmu fa deɛ, wawie dada a wɔrebɛbuebue ano. Ɛbi nso guso rekɔso, ɛna nkaeɛ nso afei ansana ɔmo de asɔ bɛbɔ fam, atwa ahoma mu ahyɛ aseɛ ayɔ.
Ampa, ɛmmfa ho ne Chinafoɔ kɔfarebae yadeɛ kɔdiawuo Covid-19 a ɛnntumi mma dɔm nkyersoɔ nhyiam’ wɔ faako mpo no, Bonofoɔ tuu twi kɔhyiaa Ɔmanpanyin ne n’atenakonwa, kyerɛɛ wɔn sɛ wɔn ani asɔ mpuntudwuma a wama aso wɔn so bie no.
Wɔ ne nnaanu aprɔbɔ no mu, Ɔmanpanyin Nana Addo hyiaa Ahenfo ne Ahemaa, wɔn a wɔwɔ twaka wɔ Mantan yi mu, ɛnna ɔtoaa so twaa nhoma mu buebuee mpuntundwuma bi tesɛ: mfidie a yɛde bɛyam ntoosi agu ntoa mu, a ɛwɔ Gyinigyini, Sukuu adan wɔ mmeammea beberee, abɛɛfo nsuo a yɛkyim no a na ɛresɔne yi bi, Ahenfo ne Ahemaa badwakuo dan foforɔ (Office For House Of Chiefs), asaasebire kotaare akwan, ne afidie kyenkyinenkye anwanwasono kɛseɛ bi a wɔrehyɛ aseɛ asi de apɛ sumina korabea, ne nwuma pii a ɛkekaho a ne nyinaa wɔ Bonomantan yi mu – ɛfiri kuropɔn Sunyani mu kɔpem Gyaman Atifi Goka.
Ɛwɔ ɔman Ghana kasafidie kɛseɛ Radio BAR 93.5Mghz so, Ɔmanpanyin Nana Addo hyɛɛ manfoɔ a wɔn sika akɔdi DKM sikakorabea dwirimfoɔ no nkyɛn sɛ: Ɛbɔ bosome a yɛwɔm’ yi nkɔ n’awieɛ deɛ, na obiara a ne sika akɔdi hɔ no, ne nsa aka n’adeɛ.
Englisini abɔfra mmɔbrɔfoɔ Oliver Twist se: abere biara ɔpɛ dodoɔ, enti, sɛdeɛ nipa didie, dasɔreɛ, na n’ahiadeɛ kɔso dɔɔso no, Akanfoɔ Abakan Bonoman nso se: Ɔmanpanyin, yɛda wo ase, na ebi mmra bio. Sɛ Ghanaman mma asiahenefoɔ de wɔn kokrobetie sane yi wo sɛ toaso mfeɛ nnan bio wɔ Ɔpenima da a ɛtɔso nson abatoɔ yi mu a, ma Bonoman nkɔsoɔ nsane nyɛ w’adehiadeɛ bio. Wokɔ W’ahenie mu a, kae yɛn.
Ɔtwerɛfoɔ no ne: Owura Kwasi Yeboah
Tags: Bonomantan Mu Nana Addo Dankwa Akufo Addo
Previous Ɔmanpanyin Aprɔpɔ Da A Ɛtɔso Mienu Wɔ Bonomantan Mu
Next UG Senior Lecturer, Prof Yaw Benneh Reportedly Murdered In Cold Blood